မြန်မာ့အရေးမှာ မှန်ကန်တဲ့ဖက်ကိုသာ ရပ်တည်ခဲ့တဲ့ တရုတ်နဲ့ သာဝတို့ ကွဲတဲ့ပွဲ – New Of Burmese
မြန်မာ့အရေးမှာ မှန်ကန်တဲ့ဖက်ကိုသာ ရပ်တည်ခဲ့တဲ့ တရုတ်နဲ့ သာဝတို့ ကွဲတဲ့ပွဲ
တရုတျသမ်မတ ရှီကငျြ့ဖငျသညျ ၂၀၁၃ စကျတငျဘာလ မှစ၍ ၎င်းငျး၏ ရပျဝနျး နှငျ လမျးစီမံကိနျးကွီးဖွငျ့ ကမ်ဘာတဝှမျး ရှိ နိုငျငံပေါငျး ၇၀ ခနျ့တှငျရှိ အခွခေံ အဆောကျအအုံ ပိုငျး မြား အား ရငျးနှီးမွုပျနှံရနျ စတငျ လာခဲ့သညျ။ထိုအခြိနျမှစ၍ တရုတျသညျ ၎င်းငျးတို့အတှကျ စှမျးအငျဖူလုံရေး နှငျ့ အိန်ဒိယ သမုဒ်ဒရာသို့ ထှကျပေါကျရရှိရေး အတှကျ မွနျမာ အပျေါ လုံးဝ မကျြစိကလြာခဲ့ကွသညျ။ထို့အတှကျလညျး ၂၀၁၇ တှငျ တရုတျ-မွနျမာ စီးပှားရေး စင်ျကွနျလမျး စီမံကိနျးဆိုကာ ကခငျြ နှငျ့ ရှမျးပွညျနယျမြားတှငျ စကျမှုဇုံမြား တညျဆောကျရေး၊ ကြောကျဖွူတှငျ ရနေကျ ဆိပျကမျးနှငျ့ အထူးစီးပှားရေးဇုံမြား၊ ယူနနျ- မန်တလေး- ရနျကုနျ၊ မန်တလေး-ကြောကျဖွူ အဝေးပွေးလမျး စီမံကိနျးမြား၊ ရနျကုနျ ခတျေမီ မွို့သဈ တိုးခြဲ့ရေး စီမံကိနျးမြား အဆိုပွုလာခဲ့သညျ။
ထို့ပွငျ မွနျမာတှငျ တူးဖျေါ၍ ရမညျ့ ရနေံ နှငျ့ သဘာဝဓါတျငှေ့ အကှကျပေါငျး ၁၀၄ ကှကျလညျး ရှိနပွေီး အရှတေ့ောငျအာရှ တှငျ ပမာဏ အမြားဆုံး ဖွဈမညျဟု ထငျကွေးပေးခံနရေသညျ။ ထိုစီမံကိနျးမြား အကောငျအထညျ ဖျေါရေးအတှကျ မွနျမာတှငျ နိုငျငံရေးအရ တညျငွိမျပွီး လူထု ထောကျခံမှု ရထားသညျ့။အစိုးရတရပျ ပျေါထှနျးရေးသညျ တရုတျအတှကျ သရေေးရှငျရေး တမြှ အရေးကွီးနရေပွီ ဖွဈသညျ။ထိုအခကျြကို ပျေါလှငျစရေနျ တရုတျသမ်မတ ရှီကငျြ့ဖငျသညျ မွနျမာနိုငျငံသို့ ကိုယျတိုငျကိုယျကြ ရောကျရှိလာခဲ့ပွီး နိုငျငံတျောအတိုငျပငျခံနှငျ့ ဆှေးနှေးခဲ့သဖွငျ့ နှဈပေါငျး နှဈဆယျအတှငျး မွနျမာပွညျသို့ ရောကျရှိလာသော တရုတျသမ်မတ ၏ သမိုငျးဝငျ ခရီး ဖွဈသှားခဲ့ရသညျ။
တရုတျဖကျကလညျး နိုငျငံရေး တညျငွိမျမှု လညျး ရှိမညျ ဗိုလျခြုပျကွီးမြား အလိုကလြညျး ဖွဈမညျဆိုက တရုတျတို့ အဖို့ အတိုငျးထကျအလှနျ တံခှနျနှငျ့ ကုက်ကား ဖွဈပမေညျသာ။ လိုခငျြတာ မှနျသမြှ ပံ့ပိုးပေးခဲ့ရှာသော မိတျဆှဟေောငျးမြားနှငျ့သာ ဆကျဆံခငျြကွပလေိမျ့မညျသာ။သို့သျော ထိုအခွငျးအရာ နှဈရပျကား တပွိုငျတညျး မညျသို့မြှ ဖွဈလာနိုငျဖှယျမရှိ၊ ဗိုလျခြုပျကွီးမြား အလိုကြ ဖွဈက တိုငျးပွညျတဝှမျးဆူပူ ကာ မတညျမငွိမျ အခွအေနကေို အမွဲလို ရငျဆိုငျသှားရပတေော့မညျ။ နိုငျငံတှငျးရှိ တရုတျထောကျလှမျးရေး သတငျးရပျကှကျမြားကလညျး ၎င်းငျးတို့၏ အဓိပ်ပါယျမဲ့ လုပျရပျမြားကို ထောကျခံမှု မရှိကွောငျးကို ရှီကငျြ့ပငျထံ အပွညျ့အစုံ အစီရငျခံထားပွီးလညျး ဖွဈပမေညျ။
ထို့အတှကျလညျး တရုတျ အစိုးရ အာဘျော သတငျးစာမြားက အရေးတယူလုပျ၍ ဖျေါပွရေးသားခဲ့ခွငျး မရှိသညျကပငျ ထငျရှားစှာ ပွဆိုနပေသေညျ။ ထို့အတှကျ မိမိအာဏာရရေး ကို ဦးတညျပွီး နိုငျငံတကာ နှငျ့ ပွညျသူမြားက အတညျပွုပွီးသား ရှေးကောကျပှဲ ရလဒျကို ဘာမဟုတျသညျ့ အကွောငျးလေးမြားဖွငျ့ ဆီလို အပေါကျရှာပွီး မှောကျလှနျ ပွဈရနျ ကွံစညျလာမှု မြိုးကို အဘယျသို့မြား အားပေးပမေညျနညျး။ထိုမှတဆငျ့ ကွိမျးသေ ဖွဈပျေါလာဖှယျရှိနသေညျ့ ပွညျတှငျး‌ရေး မတညျငွိမျမှုမြားဖွငျ့ တိုငျးပွညျသညျ ကြှမျးထိုးမှောကျခုံ ဖွဈလာက တရုတျတို့ ခဲလသေမြှ သဲရကြေ ရပတေော့မညျသာ ဖွဈသညျ။ မိမိတို့နိုငျငံ စှမျးအငျ ဖူလုံရေး နှငျ့ အိန်ဒိယ သမုဒ်ဒရာသို့ ထှကျပေါကျရရေးထကျ တစုံတဦး အာဏာတညျမွဲရေးကို ဦးစားပေးရနျက ပို၍အရေးကွီး နသေလော။
တရုတျနိုငျငံခွားရေး ဝနျကွီး ဝမျယီသညျ မွနျမာနိုငျငံ မှ တဆကျတညျးသှားခဲ့သညျ့ အငျဒိုနီရှား၊ ဖိလဈပိုငျ နှငျ့ ဘရူးနိုငျးတို့တှငျလညျး ဒသေတှငျး တညျငွိမျမှူ ရှိရေး ကို တဖှဖှ ပွောဆိုသှားခဲ့သညျ။နောကျတကွောငျးက မွနျမာသညျ တရုတျ-အာဆီယံ ဆကျဆံရေး ဆိုငျရာ ညှိနှိုငျးရေး တာဝနျခံ ရာထူးကို ရယူရတော့မညျဖွဈသညျ့အပွငျ တောငျတရုတျ ပငျလယျတှငျ နိုငျငံမြား လိုကျနာရမညျ့ Code of Conduct (COC) တှငျ မွနျမာသညျ ပူးတှဲဥက်ကဌ တာဝနျကို ထမျးဆောငျရမညျ ဖွဈသညျ။ တရုတျသညျ တောငျတရုတျ ပငျလယျတှငျ ဖွဈပှားနသေော အငွငျးပှားမှုမြားကို နိုငျငံ တနိုငျငံခငျြးစီ နှငျ့ ဖွရှေငျးရနျ လုံးဝ ဆနျ့ကငျြနပွေီး အာဆီယံ အဖှဲ့လိုကျ နှငျ့သာ ဆှေးနှေးလိုသညျ၊
ဒီအတှကျ အမြား၏ ယုံကွညျ လေးစားခွငျးခံထားရသညျ့ နိုငျငံတျော အတိုငျပငျခံကသာ အာဆီယံကို စညျးရုံးနိုငျစှမျး ရှိလိမျ့မညျဟု ယုံကွညျနသေညျဟု သတငျးမြား ထှကျပျေါနသေညျ၊ ထိုအရေးကို သာဝ-ကွံ့ခိုငျ မဟာမိတျ အဖှဲ့ကဆောငျကဉျြးပေးနိုငျပမေညျလော။ I don’t think so.
တရုတ်သမ္မတ ရှီကျင့်ဖင်သည် ၂၀၁၃ စက်တင်ဘာလ မှစ၍ ၎င်း၏ ရပ်ဝန်း နှင် လမ်းစီမံကိန်းကြီးဖြင့် ကမ္ဘာတဝှမ်း ရှိ နိုင်ငံပေါင်း ၇၀ ခန့်တွင်ရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ ပိုင်း များ အား ရင်းနှီးမြုပ်နှံရန် စတင် လာခဲ့သည်။ထိုအချိန်မှစ၍ တရုတ်သည် ၎င်းတို့အတွက် စွမ်းအင်ဖူလုံရေး နှင့် အိန္ဒိယ သမုဒ္ဒရာသို့ ထွက်ပေါက်ရရှိရေး အတွက် မြန်မာ အပေါ် လုံးဝ မျက်စိကျလာခဲ့ကြသည်။ထို့အတွက်လည်း ၂၀၁၇ တွင် တရုတ်-မြန်မာ စီးပွားရေး စင်္ကြန်လမ်း စီမံကိန်းဆိုကာ ကချင် နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်များတွင် စက်မှုဇုံများ တည်ဆောက်ရေး၊ ကျောက်ဖြူတွင် ရေနက် ဆိပ်ကမ်းနှင့် အထူးစီးပွားရေးဇုံများ၊ ယူနန်- မန္တလေး- ရန်ကုန်၊ မန္တလေး-ကျောက်ဖြူ အဝေးပြေးလမ်း စီမံကိန်းများ၊ ရန်ကုန် ခေတ်မီ မြို့သစ် တိုးချဲ့ရေး စီမံကိန်းများ အဆိုပြုလာခဲ့သည်။
ထို့ပြင် မြန်မာတွင် တူးဖေါ်၍ ရမည့် ရေနံ နှင့် သဘာဝဓါတ်ငွေ့ အကွက်ပေါင်း ၁၀၄ ကွက်လည်း ရှိနေပြီး အရှေ့တောင်အာရှ တွင် ပမာဏ အများဆုံး ဖြစ်မည်ဟု ထင်ကြေးပေးခံနေရသည်။ ထိုစီမံကိန်းများ အကောင်အထည် ဖေါ်ရေးအတွက် မြန်မာတွင် နိုင်ငံရေးအရ တည်ငြိမ်ပြီး လူထု ထောက်ခံမှု ရထားသည့်။အစိုးရတရပ် ပေါ်ထွန်းရေးသည် တရုတ်အတွက် သေရေးရှင်ရေး တမျှ အရေးကြီးနေရပြီ ဖြစ်သည်။ထိုအချက်ကို ပေါ်လွင်စေရန် တရုတ်သမ္မတ ရှီကျင့်ဖင်သည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံနှင့် ဆွေးနွေးခဲ့သဖြင့် နှစ်ပေါင်း နှစ်ဆယ်အတွင်း မြန်မာပြည်သို့ ရောက်ရှိလာသော တရုတ်သမ္မတ ၏ သမိုင်းဝင် ခရီး ဖြစ်သွားခဲ့ရသည်။
တရုတ်ဖက်ကလည်း နိုင်ငံရေး တည်ငြိမ်မှု လည်း ရှိမည် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ အလိုကျလည်း ဖြစ်မည်ဆိုက တရုတ်တို့ အဖို့ အတိုင်းထက်အလွန် တံခွန်နှင့် ကုက္ကား ဖြစ်ပေမည်သာ။ လိုချင်တာ မှန်သမျှ ပံ့ပိုးပေးခဲ့ရှာသော မိတ်ဆွေဟောင်းများနှင့်သာ ဆက်ဆံချင်ကြပေလိမ့်မည်သာ။သို့သော် ထိုအခြင်းအရာ နှစ်ရပ်ကား တပြိုင်တည်း မည်သို့မျှ ဖြစ်လာနိုင်ဖွယ်မရှိ၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ အလိုကျ ဖြစ်က တိုင်းပြည်တဝှမ်းဆူပူ ကာ မတည်မငြိမ် အခြေအနေကို အမြဲလို ရင်ဆိုင်သွားရပေတော့မည်။ နိုင်ငံတွင်းရှိ တရုတ်ထောက်လှမ်းရေး သတင်းရပ်ကွက်များကလည်း ၎င်းတို့၏ အဓိပ္ပါယ်မဲ့ လုပ်ရပ်များကို ထောက်ခံမှု မရှိကြောင်းကို ရှီကျင့်ပင်ထံ အပြည့်အစုံ အစီရင်ခံထားပြီးလည်း ဖြစ်ပေမည်။
ထို့အတွက်လည်း တရုတ် အစိုးရ အာဘော် သတင်းစာများက အရေးတယူလုပ်၍ ဖေါ်ပြရေးသားခဲ့ခြင်း မရှိသည်ကပင် ထင်ရှားစွာ ပြဆိုနေပေသည်။ ထို့အတွက် မိမိအာဏာရရေး ကို ဦးတည်ပြီး နိုင်ငံတကာ နှင့် ပြည်သူများက အတည်ပြုပြီးသား ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်ကို ဘာမဟုတ်သည့် အကြောင်းလေးများဖြင့် ဆီလို အပေါက်ရှာပြီး မှောက်လှန် ပြစ်ရန် ကြံစည်လာမှု မျိုးကို အဘယ်သို့များ အားပေးပေမည်နည်း။ထိုမှတဆင့် ကြိမ်းသေ ဖြစ်ပေါ်လာဖွယ်ရှိနေသည့် ပြည်တွင်း‌ရေး မတည်ငြိမ်မှုများဖြင့် တိုင်းပြည်သည် ကျွမ်းထိုးမှောက်ခုံ ဖြစ်လာက တရုတ်တို့ ခဲလေသမျှ သဲရေကျ ရပေတော့မည်သာ ဖြစ်သည်။ မိမိတို့နိုင်ငံ စွမ်းအင် ဖူလုံရေး နှင့် အိန္ဒိယ သမုဒ္ဒရာသို့ ထွက်ပေါက်ရရေးထက် တစုံတဦး အာဏာတည်မြဲရေးကို ဦးစားပေးရန်က ပို၍အရေးကြီး နေသလော။
တရုတ်နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဝမ်ယီသည် မြန်မာနိုင်ငံ မှ တဆက်တည်းသွားခဲ့သည့် အင်ဒိုနီရှား၊ ဖိလစ်ပိုင် နှင့် ဘရူးနိုင်းတို့တွင်လည်း ဒေသတွင်း တည်ငြိမ်မှူ ရှိရေး ကို တဖွဖွ ပြောဆိုသွားခဲ့သည်။နောက်တကြောင်းက မြန်မာသည် တရုတ်-အာဆီယံ ဆက်ဆံရေး ဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းရေး တာဝန်ခံ ရာထူးကို ရယူရတော့မည်ဖြစ်သည့်အပြင် တောင်တရုတ် ပင်လယ်တွင် နိုင်ငံများ လိုက်နာရမည့် Code of Conduct (COC) တွင် မြန်မာသည် ပူးတွဲဥက္ကဌ တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ရမည် ဖြစ်သည်။ တရုတ်သည် တောင်တရုတ် ပင်လယ်တွင် ဖြစ်ပွားနေသော အငြင်းပွားမှုများကို နိုင်ငံ တနိုင်ငံချင်းစီ နှင့် ဖြေရှင်းရန် လုံးဝ ဆန့်ကျင်နေပြီး အာဆီယံ အဖွဲ့လိုက် နှင့်သာ ဆွေးနွေးလိုသည်၊
ဒီအတွက် အများ၏ ယုံကြည် လေးစားခြင်းခံထားရသည့် နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံကသာ အာဆီယံကို စည်းရုံးနိုင်စွမ်း ရှိလိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်နေသည်ဟု သတင်းများ ထွက်ပေါ်နေသည်၊ ထိုအရေးကို သာဝ-ကြံ့ခိုင် မဟာမိတ် အဖွဲ့ကဆောင်ကျဉ်းပေးနိုင်ပေမည်လော။ I don’t think so.
Previous Article အမေရိကန်ကုမ္ပဏီတွေ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုတွေပိုလုပ်ဖို့ မြန်မာအစိုးရဖိတ်ခေါ်
Next Article မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပထမဆုံးမှန်တံတားနဲ့ အပန်းဖြေစခန်း လာမယ့်နှစ်မှာ ဖွင့်လှစ်နိုင်ဖို့လျာထား…